အသင်း ပြောင်းရွှေ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီဂီယာကို သတိပေး စကား ဆိုသွားလိုက်တဲ့ ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမားဟောင်း - SPORTS MYANMAR
အသင်း ပြောင်းရွှေ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီဂီယာကို သတိပေး စကား ဆိုသွားလိုက်တဲ့ ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမားဟောင်း
ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဂိုးသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရှဝါဇာ က ယူနိုက်တက် နံပါတ် တစ် ဂိုးသမား ဖြစ်သူ ဒေးဗစ် ဒီဂီယာ အနေ နဲ့ လစာ ငွေ များစွာ လိုချင် ပါက ( သို့မဟုတ် ) အသင်း ပြောင်းရွှေ့ လို ပါက လက်ရှိ ကစား နေတဲ့ အနေအထား ထက် ပိုကောင်း တဲ့ ပုံစံ တွေကို ပြသ သွားဖို့ လိုအပ် ကြောင်း သတိပေး စကား ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် ဒီဂီယာ ဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး သွားဖို့ ရှိ နေတဲ့ အတွက် အသင်း ဖက်မှ သူ့ကို စာချုပ် ချုပ်ဆို ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အခြား တစ်ဖက် မှာ သူ့ကို ခေါ်ယူ ဖို့ အတွက် စီးရီးအေ ချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ် အသင်း နဲ့ လီဂူး ဝမ်း ချန်ပီယံ PSG အသင်း တို့က စိတ်ဝင်စား နေကြ ပါတယ် ။
အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ယူနိုက်တက် နံပါတ် တစ် ဂိုးသမား ဖြစ်သူ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကုန်ဆုံး ကာနီး မှာ အမှား တွေ များစွာ ကျူးလွန် ထားခဲ့ သလို ဒီဘောလုံး ရာသီ မှာလည်း မလိုအပ် တဲ့ အမှား တွေကို ထပ်မံ ကျုးလွန် ထားခဲ့ ပါ သေးတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီဂီယာ အနေ နဲ့ ယူနိုက်တက် ဆီမှ လိုချင် သလောက် ပမာဏ တစ်ခု ရယူ လို ပါက ( သို့မဟုတ် ) အသင်း ပြောင်းရွှေ့ လို ပါက ထိုက်တန် တဲ့ လက်စွမ်း ကောင်း တွေကို ပြသ သွားနိုင် ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း ၊ လက်ရှိ လက်စွမ်း ကို ပိုမို တိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း ရှဝါဇာ က သတိပေး သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
” ယူနိုက်တက် ဖက်က ဒီဂီယာ တောင်းဆို နေတဲ့ ပမာဏ က သူနဲ့ ထိုက်တန် မှု ရှိသလား ဆိုတာ ကို ဆုံးဖြတ် ရမယ့် အနေ အထား တစ်ခု ရောက်ရှိ လာပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါ့အပြင် သူနဲ့ ပတ်သက် လို့ ကောလဟာလ သတင်း တွေလည်း ထွက်ပေါ် နေခဲ့ ပါ သေးတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ နိုင်ခြေ လည်း ရှိနေ ပါတယ် ”
” အဲ့ဒီလို အနေအထား တွေမှာ ခင်ဗျား ရဲ့ သမိုင်း ကြောင်း ၊ အတိတ် က စွမ်းဆောင်ရည် အနေအထား တွေကို အခု ပိုင်ဆိုင် နေ သေးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ထွက်ပေါ် လာပါ လိမ့်မယ် ။ အကယ်လို့ ခင်ဗျား ဟာ သူ့ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့6လတာ တုန်းက စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် သူဟာ အတိတ် တုန်းက လောက် ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိ တာကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ် ”
” အကယ်လို့ သူသာ တိုးတက် မလာဘူး ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အမှား တွေကြောင့် တိုက်ရိုက် ဂိုးတွေ များစွာ ပေးရ ပါ လိမ့်မယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့6–7နှစ်တာ ကာလ အတွင်း မှာ သူဟာ မလိုအပ် တဲ့ အမှား တွေကို တက်နိုင် သလောက် မလုပ် မိအောင် တုန့်ပြန် နိုင် ခဲ့တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါ ။ အခု အချိန် မှာတော့ ခင်ဗျား ရဲ့ တန်ဖိုး က ဘယ်လောက် လဲ ? ဒီလို မေးရင် လက်ရှိ လက်စွမ်း ကိုပဲ လူတွေ ကြည့်ကြ ပါ လိမ့်မယ် ”
” သူဟာ အရင် တုန်းက လက်စွမ်း မျိုးကို ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဦး မလား ? သူဟာ အရင် လို တည်ငြိမ် တဲ့ လက်စွမ်း တွေ ပြနိုင် ဦးမယ့် သူလား ? အကယ်လုိ့ ဒေးဗစ် ဒီဂီဟာ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့6လ7လ လောက် တုန်းက လုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ အမှား မျိုးတွေ သာ ဆက်တိုက် ကျူးလွန် မထား ခဲ့ဘူး ဆိုရင် သူ လက်စွမ်း တည်ငြိမ် မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မျိုး ကျွန်တော် ထုတ်မှာ မဟုတ် ပါဘူး ” လို့ ရှဝါဇာ က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ သတင်း တွေ အရ တော့ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ဒီဂီယာ ကို တစ်ပါတ် ပေါင် 290,000 နဲ့ ခေါ်ယူ ဖို့ နီးစပ် နေပြီ လို သိရှိ ခဲ့ရ ပါ သေးတယ် ။ ယခင် တုန်းက စပိန် လက်ရွေးစင် အသင်း ရဲ့ နံပါတ် တစ် ဂိုးသမား ဖြစ်ခဲ့ သေးတဲ့ ဒီဂီယာ ဟာ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ပွဲထွက် ခွင့် ရရှိရေး အတွက် ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမား ကီပါ နဲ့ တိုက်ပွဲ ဝင်နေ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အသငျး ပွောငျးရှရေ့ေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဒီဂီယာကို သတိပေး စကား ဆိုသှားလိုကျတဲ့ ခြဲလျဆီး ဂိုးသမားဟောငျး
ခြဲလျဆီး အသငျး ရဲ့ ဂိုးသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ရှဝါဇာ က ယူနိုကျတကျ နံပါတျ တဈ ဂိုးသမား ဖွဈသူ ဒေးဗဈ ဒီဂီယာ အနေ နဲ့ လစာ ငှေ မြားစှာ လိုခငျြ ပါက ( သို့မဟုတျ ) အသငျး ပွောငျးရှေ့ လို ပါက လကျရှိ ကစား နတေဲ့ အနအေထား ထကျ ပိုကောငျး တဲ့ ပုံစံ တှကေို ပွသ သှားဖို့ လိုအပျ ကွောငျး သတိပေး စကား ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
လကျရှိ အခြိနျ ဒီဂီယာ ဟာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး ကုနျဆုံး သှားဖို့ ရှိ နတေဲ့ အတှကျ အသငျး ဖကျမှ သူ့ကို စာခြုပျ ခြုပျဆို ဖို့ အတှကျ လုပျဆောငျ နခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ အခွား တဈဖကျ မှာ သူ့ကို ချေါယူ ဖို့ အတှကျ စီးရီးအေ ခနျြပီယံ ဂြူဗငျတပျ အသငျး နဲ့ လီဂူး ဝမျး ခနျြပီယံ PSG အသငျး တို့က စိတျဝငျစား နကွေ ပါတယျ ။
အခွား တဈဖကျ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ နံပါတျ တဈ ဂိုးသမား ဖွဈသူ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကုနျဆုံး ကာနီး မှာ အမှား တှေ မြားစှာ ကြူးလှနျ ထားခဲ့ သလို ဒီဘောလုံး ရာသီ မှာလညျး မလိုအပျ တဲ့ အမှား တှကေို ထပျမံ ကြုးလှနျ ထားခဲ့ ပါ သေးတယျ ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဂီယာ အနေ နဲ့ ယူနိုကျတကျ ဆီမှ လိုခငျြ သလောကျ ပမာဏ တဈခု ရယူ လို ပါက ( သို့မဟုတျ ) အသငျး ပွောငျးရှေ့ လို ပါက ထိုကျတနျ တဲ့ လကျစှမျး ကောငျး တှကေို ပွသ သှားနိုငျ ဖို့ လိုအပျ ကွောငျး ၊ လကျရှိ လကျစှမျး ကို ပိုမို တိုးတကျ အောငျ လုပျဆောငျ သငျ့ကွောငျး ရှဝါဇာ က သတိပေး သှားခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
” ယူနိုကျတကျ ဖကျက ဒီဂီယာ တောငျးဆို နတေဲ့ ပမာဏ က သူနဲ့ ထိုကျတနျ မှု ရှိသလား ဆိုတာ ကို ဆုံးဖွတျ ရမယျ့ အနေ အထား တဈခု ရောကျရှိ လာပါ လိမျ့မယျ ။ ဒါ့အပွငျ သူနဲ့ ပတျသကျ လို့ ကောလဟာလ သတငျး တှလေညျး ထှကျပျေါ နခေဲ့ ပါ သေးတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူဟာ အသငျး ပွောငျးရှေ့ နိုငျခွေ လညျး ရှိနေ ပါတယျ ”
” အဲ့ဒီလို အနအေထား တှမှော ခငျဗြား ရဲ့ သမိုငျး ကွောငျး ၊ အတိတျ က စှမျးဆောငျရညျ အနအေထား တှကေို အခု ပိုငျဆိုငျ နေ သေးလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး တဈခု ထှကျပျေါ လာပါ လိမျ့မယျ ။ အကယျလို့ ခငျဗြား ဟာ သူ့ရဲ့ လှနျခဲ့တဲ့6လတာ တုနျးက စှမျးဆောငျရညျ တှကေို ကွညျ့မယျ ဆိုရငျ သူဟာ အတိတျ တုနျးက လောကျ ကောငျးမှနျခွငျး မရှိ တာကို တှရေ့ ပါလိမျ့မယျ ”
” အကယျလို့ သူသာ တိုးတကျ မလာဘူး ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ အမှား တှကွေောငျ့ တိုကျရိုကျ ဂိုးတှေ မြားစှာ ပေးရ ပါ လိမျ့မယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့6–7နှဈတာ ကာလ အတှငျး မှာ သူဟာ မလိုအပျ တဲ့ အမှား တှကေို တကျနိုငျ သလောကျ မလုပျ မိအောငျ တုနျ့ပွနျ နိုငျ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား တဈဦး ပါ ။ အခု အခြိနျ မှာတော့ ခငျဗြား ရဲ့ တနျဖိုး က ဘယျလောကျ လဲ ? ဒီလို မေးရငျ လကျရှိ လကျစှမျး ကိုပဲ လူတှေ ကွညျ့ကွ ပါ လိမျ့မယျ ”
” သူဟာ အရငျ တုနျးက လကျစှမျး မြိုးကို ပွနျလညျ ပိုငျဆိုငျ နိုငျဦး မလား ? သူဟာ အရငျ လို တညျငွိမျ တဲ့ လကျစှမျး တှေ ပွနိုငျ ဦးမယျ့ သူလား ? အကယျလို့ ဒေးဗဈ ဒီဂီဟာ ဟာ လှနျခဲ့တဲ့6လ7လ လောကျ တုနျးက လုပျဆောငျ ခဲ့တဲ့ အမှား မြိုးတှေ သာ ဆကျတိုကျ ကြူးလှနျ မထား ခဲ့ဘူး ဆိုရငျ သူ လကျစှမျး တညျငွိမျ မလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး မြိုး ကြှနျတျော ထုတျမှာ မဟုတျ ပါဘူး ” လို့ ရှဝါဇာ က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
နောကျဆုံး ထှကျပျေါ ခဲ့တဲ့ သတငျး တှေ အရ တော့ ယူနိုကျတကျ တို့ဟာ ဒီဂီယာ ကို တဈပါတျ ပေါငျ 290,000 နဲ့ ချေါယူ ဖို့ နီးစပျ နပွေီ လို သိရှိ ခဲ့ရ ပါ သေးတယျ ။ ယခငျ တုနျးက စပိနျ လကျရှေးစငျ အသငျး ရဲ့ နံပါတျ တဈ ဂိုးသမား ဖွဈခဲ့ သေးတဲ့ ဒီဂီယာ ဟာ လကျရှိ အခြိနျ မှာတော့ ပှဲထှကျ ခှငျ့ ရရှိရေး အတှကျ ခြဲလျဆီး ဂိုးသမား ကီပါ နဲ့ တိုကျပှဲ ဝငျနေ ခဲ့ရ ပါတယျ ။